”Lama yaabani bandhigga cajiibka ah ee Manolo Gabbiadini” – Gool FM
”Lama yaabani bandhigga cajiibka ah ee Manolo Gabbiadini”
(London) 27 Feb 2017 – Wakiilka Manolo Gabbiadini ayaa ku adkaysanaya inuu filayay in qannaaskii hore Napoli “uu hawada geli doono marka uu tago Ingiriiska” isagoo ula jeeda bandhigga laacibka ee Southampton.
Gabbiadini oo £17m suuq-jiilaalkii Napoli uga soo wareegay isla markaana 3 kulan uun ilaa haatan saftay ayaa 5 gool u dhaliyay Southampton isagoo 2 gool ku lahaa kulankii shalay ee EFL Cup final, tiiyoo ay jirto in Saints lagu tumay 3-2 iyadoo ay koobkii qaadatay Manchester United.
“Waan filayay in Manolo uu ku qarxi doono England,” ayuu yiri Silvio Pagliari oo la hadlayay Sport Mediaset.
“Wuxuu yeeshay saamayn aad u wayn, aad baana ugu faraxsanahay. Maxaa Napoli iska bedeley? Lafteedu ma xumayn oo wuu fiicnaa 6-dii bilood ee ugu dambeeyay.” ayuu raaciyay Pagliari.
Yaya Toure "Waan sii wadan doonaa ciyaarta kubadda cagta ama gudaha ayaan ka sii dheeli doonaa ama dibadda"
Ibrahimovic "Libaaxu wuxuu dhashaa isagoo Libaax ah aniguna waxaan ahay Libaax"